Amoxicillin - ကျယ်ပြန့်ရောင်စဉ်ပဋိဇီဝဆေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကဲ့သို့သောဘုံရောဂါများကုသရာတွင်အသုံးပြုသည်:
လည်ချောင်းနာ, နမိုးနီးယား, ချောင်းဆိုးရင်ကျပ် , sinusitis, otitis;
အဆိုပါ genitourinary စနစ်၏ urethritis, pyelitis, cystitis, pyelonephritis နှင့်အခြားရောဂါကူးစက်မှု;
, Peritonitis, cholangitis, cholecystitis နှင့်အခြား - အစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းပိုးဝင်
Leptospirosis, နှောက်အမြှေးရောင်, ရောဂါဆိပ်ပျံ့နှံ့;
နို့နေချိန်မှာငါ amoxicillin အသုံးပွုနိုငျသနညျး
မဆို medicament နို့တိုက်အထူးဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်။ ဤကာလအတွင်း မိခင်နို့၏ဖွဲ့စည်းမှု မူးယစ်ဆေးဝါးကနေဓာတုပစ္စည်းထိုးဖောက်နိုင်ပြီး, ထိခိုက်မှုတစ်ခုနုမွေးကင်းစခန္ဓာကိုယ်က flanked ။
ပဋိဇီဝဆေး Amoxicillin ကို manual ၏အသုံးပြုမှုသည်သူမိခင်နို့သို့ပမာဏအနည်းငယ်အတွက် lactation သည့်အခါကပြောပါတယ်, ဤကာလ၌လျှောက်ထားရန်သတိထားရပါမည်။ ထို့ကြောင့်, နို့စဉ်ဆရာဝန်သာလုံလုံလောက်လောက်ကောင်းသောအကြောင်းပြချက်နိုင် amoxicillin အကြံပြုပါသည်။
ဒါပေမယ့်ပင်ဤကိစ္စတွင်အတွက်တစ်ဦးသူနာပြုမိခင်တစ်ဦးပဋိဇီဝဆေးများ၏ဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုများအနေဖြင့်ထိုသူငယ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်ပါတယ်။ HV amoxicillin အောက်ရှိကာလကလေးတစ်ဦးမိခင်နို့နို့တိုက်ကျွေးမှု၏စေခြင်းငှါယာယီရပ်နားခြင်းသည်။ ဒါဟာပုံမှန် decant နှင့်နို့ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ကြိုးစားကြရပါမည်။ ၏သင်တန်း, ဒီအခြို့သောအားထုတ်မှုလိုအပ်ပါတယ်။ မူးယစ်ဆေး amoxicillin နို့တိုက်၏ရည်ရွယ်ချက်ရှောင်ရှားမရနိုငျလြှငျမူကားဤကဲ့သို့သောအစွန်းရောက်အစီအမံနှုနျးရန်လိုအပ်ပေသည်။
သဘာဝကျကျသည်ပဋိဇီဝဆေး Amoxycillin နို့တိုက်ကျွေးရေးအားကောင်းတဲ့အခြေစိုက်စခန်းများနှင့်အတူအပြစ်နှင့်လွတ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ငါ့အမိရုံဆားတစ်ဦးဖျားခြင်း, လည်ချောင်းနာ, သို့မဟုတ်အခြားရောဂါလက္ခဏာတွေရှိခဲ့လျှင်သင်ချက်ချင်းဆေးမယူသင့်ပါတယ်။ ပထမဦးစွာသင်၏ဆရာဝန်ကိုခေါ်ပါ။ ပြီးတော့သင်ရိုးရှင်းစွာအိပ်ရာကြွင်းသောအရာနှင့်အတူလိုက်လျောခြင်းနှင့်အရည်များများသောက်ရနိုငျသညျ။
သူနာပြုမိခင်သူ့ကိုယ်သူနှင့်သူမ၏ကလေးကစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့် GW ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့တတ်နိုင်သမျှကြိုးစားကြည့်သင့်ပါတယ်။ နို့စဉ်အတွင်း Amoxicillin နှင့်သူငယ်နို့တိုက်၏ကြာချိန်နှစ်ဦးစလုံးကိုအကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်သည်။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, တိုင်းမိခင်ကလေးနို့တိုက်ကျွေးမှုမပါဘဲနို့ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ခွန်အားနှင့်သည်းခံခြင်းရှိသည်မဟုတ်။ , 6-7 ကြိမ်နေ့အဘို့ Decant ပုလင်းပိုးမွှားသတ်နှင့်အစားအစာပေး - တဲ့သူနာပြုအမျိုးသမီးတစ်ဦးမှ amoxicillin အဘို့အမိုးသည်းထန်စွာငွေပေးချေမှု။
အစဉ်အမြဲကျန်းမာလျက်နေကြလော့မှတ်မိ - သင့်လူနေမှုပုံစံစတဲ့အခြားနုပျိုယောက်ျား၏ကျန်းမာရေးသက်ရောက်သည်။
ကျွန်မနို့တိုက်နေစဉ် raisins နိုင်သလား?
အလွယ်တကူနဲ့ painlessly ရင်ပတ်ကနေကလေးနို့ကွာဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
ကျွန်မနို့တိုက် tsitramon နိုင်သလား?
အကောင်းဆုံးကိုဥရောပစားသောက်ဆိုင်၏ TOP 10
စကတ် neoprene ထား
Miranda Kerr ရဲလက်ဝတ်ရတနာ $ 8 သန်းကိုပေးတော်မူ၏
Center ကရံ Bellavista
သုက်ပိုး Motilal တိုးမြှင့်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
ဘောက် - ကုသမှု